चट्याङले बेहोस बालकको होस खुल्यो - Nagarik Bahas
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०४, २०७९ समय: १९:२१:२७
उदयपुर – चट्याङको आवाजले शनिबार विहान बेहोस् भएका बालकको होस खुलेको छ । सुनिरहेका बेला परेको चट्याङको आवाजले बेहोस भएका उदयपुृरगढी गाउँपालिका ४ डुम्रेका १४ वर्षीय इन्द्र थापामगरको उपचारको क्रममा होस खुलेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार विहान ३ः४५ बजे वर्षासँगै चट्याङ पर्दा त्यसको आवाजले इन्द्र ओछ्यानमै बेहोस भएका थिए । उनलाई उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल गाईघाटमा ल्याइएको थियो । आकस्मिृक कक्ष (इमरजेन्सी) राखेरमा उपचार गराउँदा बालकको होस खुलेको अस्पतालका डा. आकांक्षा राईले बताईन् ।
चर्को आवाजका साथ परेको चट्याङले सुतिरहेको छोरा बेहोस् भएको घाईतेका बाबु सारद थापामगरले बताए । उनका अनुसार घाईते छोरार्लाइ तत्काल उद्धार गरी उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल ल्याएर इमरजेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो ।
डा. राईका अनुसार बालकको होस खुलिसकेको र स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधा भईरहेको छ ।
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको बजेट ३७ करोड ३३ लाख
उदयपुर । उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको अनुमानित बजेट ३७ करोड ३३ लाख रहेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईले आगा...
कटारी नगरपालिकाको बजेट ७६ करोड बढी
कटारी । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले ७६ करोड ४२ लाख ६२ हजार ५ सय ५० रुपैंयाको वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक ...
कटारीमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा अवैध सुर्ती बरामद
कटारी । सशस्त्र प्रहरी बल कटारीले अवैध सुर्ती बरामद गरेको छ । काकरभिट्टाबाट कटारी आउँदै गरेको मे.१ ख १७५२ नम्बरको यात्रु...